Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – Hagaajinta socodka gaadiidka | WSDOT
SR 509 Jidka xawaaraha
Hagaajinta socodka gaadiidka
Dulmarka Barnaamijka Gateway
La wadaag fikirkaaga￼
Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – Hagaajinta socodka gaadiidka
homeConstruction & planningOnline open housesGu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509Hagaajinta socodka gaadiidka
Boggan waxa uu sharaxayaa sifooyinka muhiimka ah ee mashruuca. Naqshadaynta la soo bandhigay waa fikrado. Naqshada-dhisuhu wuxuu dhamaystiri doonaa jadwallada iyo naqshadaha, kuwaas oo laga yaabo inay ka duwanaadaan naqshadaha fikradaha.
Dhismahan beddelka waqooyi-koonfur ee I-5 wuxuu u baahan yahay hagaajin lagu sameeyo waddooyinka hadda jira iyo is-weydaarsiga si loo habeeyo hababka cusub ee socodka taraafikada. Boggan waxa uu iftiiminayaa horumarka muhiimka ah ee socodka taraafikada ee lagu soo daray SR 509, 24th Avenue South ilaa South 188th Street-New Project Road Expressway.
SB I-5 haadka nafisinta, SR 516 kala wareega ilaa South 272nd Street
Kadib dhamaystirka kala wareega cusub ee I-5/SR 516 inta lagu guda jiro Heerka 1b ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509, WSDOT waxay ku fidin doontaa haad fududeeyn ah oo ah 1.6 mayl dhanka konfureed I-5 kana soo jeeda koonfur ee wadada ee SR 516 ilaa South 272nd Street Federal way, oo u dhow goobta mustaqbalka ee saldhigga tareenka fudud ee Federal Way Link Extension. Hagaajinta socodka taraafikada ee I-5 waqooyiga SR 516 waa qayb ka mid ah Heerka 1b ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509 kaas oo horeba u socday. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Heerka 1b, booqo mashruuca dhismaha kulankii furnaa ee ugu dambeeyay oo la qabtay Noofambar iyo Disembar 2021 Guji Halkan .
Isweydaarsiga Wareegga, Koonfurta 160th Street iyo South 188th Street
SDOT waxay dib u habayn doontaa labada is-weydaarsiga SR 509/South 160th Street ee Burien iyo SR 509/South 188th Street ee SeaTac, iyada oo dhisaysa dariiqyo ay SR 509 dulka iyo bannaanka ku kulmaan waddooyinka magaalada. Labada iswaydaarsi, WSDOT waxay samaysay daraasaadka taraafika iyo muuqaal guuris si ay u go’aamiyaan nashqada ugu badbaadsan uguna hufan ee dhammaan noocyada baabuurta laga soo bilaabo baabuurta waaweyn iyo basaska dugsiga ilaa baaskiil wadayaasha iyo kuraasta curyaanka (iyaga oo isticmaalaya waddooyinka dhinaceeda, dabcan!). Labada goobood, wareegyada ayaa ka fiicnaaday dhammaan xulashooyinka kale.
Sawirrada hoose waxay muujinayaan naqshadaha hadda ee is beddelka dib loo habeeyey ee Koonfurta Street 160th iyo South 188th Street.
[Muuqaalka Dhanka Bari] South 160th Street, wareegyada ayaa baabi’in doona leexashada gacanta bidix ee aan la ilaalin ee SR 509 waqooyi ka baxsan.
[Muuqaalka Dhanka Bari] Waddada Koonfureed ee 188th, jidadka wareegyadu ayaa fududeeyn doonaan socodka dhammaan jihooyinka waxayna siin doonaan waddo nabdoon oo loogu talagalay baaskiil-wadeyaasha iyo dadka lugaynaya si ay ugu xidhmaan SeaTac iyo Burien ilaa qaybta cusub ee Harada ilaa Sound Trail.
Waxaa jira in ka badan 100-wareeg ah oo ku baahsan Gobolka Washington kuwaas oo wanaajiyay socodka gaadiidka iyo badbaadada isgoysyada ciriiriga ah iyo kuwa la is dhaafsado. Xataa marka wareegyadu noqdeen kuwo aad looga yaqaana dadka Washington, WSDOT waxay weli ka go’an tahay inay siiso darawallada iyo dadka lugaynaya waxbarashada wareega. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida si badbaado leh loo kaxeeyo, loo socdo, loo rogo, ama loo dhex maro hareeraha, booqo tilmaaha badbaadada wareega WSDOT’s roundabout safety guidance
WSDOT waxay qorshaynaysaa inay adeegsato jaantusyada sida kan sawirka sare ku yaal, oo ay la socdaan fiidiyowyada badbaadada, inta lagu guda jiro hawlaha wacyigelinta bulshada ee la beegsanayo si ay gacan uga geysato dhisidda aqoonta iyo kalsoonida isticmaalka wareegyada ka hor inta aan la furin isbeddellada cusub.